ရုရှားနှင့်တရုတ်တို့ကမွန်းကိုလိုနီတည်ဆောက်မည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 Christina Kitova အာရှတိုက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing အာရှ, အာရှလက္ကား & B2B, တရုတ်နိုင်ငံ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing တရုတ်, တရုတ်လက်ကား & B2B, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာ, အိႏၵိယ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing အိန္ဒိယ, အိန္ဒိယလက်ကား & B2B, သတင်းဆောင်းပါး, ရုရှားနိုင်ငံ, ရုရှားက Global Gigs Freelancing, ရုရှားလက်ကား & B2B
အာကာသဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက် Roscosmos ပြည်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်း (ROSCOSMOS) သည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်အာကာသပျံသန်းမှုနှင့်အာကာသခရီးစဉ်များနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအာကာသခရီးစဉ်များနှင့်အမျိုးအစားများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အစိုးရကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာရုရှားရူပဗေဒပညာရှင်များကလကိုလိုနီ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပြုချက်များရှိခဲ့သည်။ Rostov-On-Don ရှိ Avanta Consulting မှဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သောရုရှားသိပ္ပံပညာရှင် Alexander Mayboroda သည်သူ၏အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
သူသည်အာကာသနှင့်သက်ဆိုင်သောများပြားသောမူပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ လတ်တလောတစ်ခုမှာ“ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအာကာသထဲသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်စနစ်တစ်ခု” ဖြစ်သည်။ လအခြေစိုက်စခန်းတွင် centrifuge ပါဝင်လိမ့်မည်။ သောမြေကြီးကဲ့သို့မြေထုဆွဲအားအဆင့်ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
Roscosmos သည်လနှင့်နီးကပ်စွာလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သောဘူတာရုံတစ်ခုဖန်တီးခြင်းအတွက် NASA နှင့်ပူးပေါင်းရန်ယခင်ကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သို့သော် Roscosmos သည်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူလကမ္ဘာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
၂၀၁၇ နို ၀ င်ဘာလတွင် Roscosmos နှင့်တရုတ်အမျိုးသားအာကာသအုပ်ချုပ်ရေးသည် ၂၀၁၈-၂၀၂၂ မှအာကာသအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
အစီအစဉ်တွင်အပိုင်း ၆ ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
ဂြိုဟ်တုများနှင့်၎င်းတို့၏ application များ။
ထို့အပြင် International Lunar Research Stations (ILRS) ၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်လ၌စက်ရုပ်များတည်ရှိနေခြင်းကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်လူသား၏တည်ရှိမှုကိုတည်မြဲစေလိမ့်မည်။ Harrison Schmitt နှင့် Gene Cernan တို့ခြေကုပ်ချန်ခဲ့သည့် ၁၉၇၂ ဒီဇင်ဘာ လမှစ၍ လူသားများသည်လကိုမခြေမချရ အဆိုပါ Apollo 17 မစ်ရှင်စဉ်အတွင်း.
National Aeronautics and Space Administration သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏အရပ်ဘက်အာကာသအစီအစဉ်အပြင်လေကြောင်းနှင့်အာကာသသုတေသနအတွက်လွတ်လပ်သောအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ NASA ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားလေကြောင်းဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံလုံးသည်လာမည့်တရုတ်မစ်ရှင်များဖြစ်သော Chang'e 6,7နှင့် 8 နှင့်ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Luna 27 မှစတင်ကာသုတေသနပြုမည်။
ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ကလ၏အခြေစိုက်စခန်းကို အသုံးပြု၍“ လ၏တောင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ပထမဆုံးလူသားမျှဝေသည့်ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းတို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊ ရေရှည်၊ အကြီးစားသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန၊ အရင်းအမြစ်များ။ "
တရုတ်နှင့်ရုရှားတို့က ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင် ILRS ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်သီအိုရီအရလွန်းတွင်ရေရှည်စက်ရုပ်များတည်ရှိမှုအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ရေရှည်လူသားများတည်ရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အစီအစဉ်များကို ၂၀၃၆ မှ ၂၀၄၅ အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ထို့အပြင်အမေရိကန်သည်လကိုလိုနီတည်ထောင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အိန္ဒိယသည်အာကာသထဲတွင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စဉ်းစားနေသည်။ ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုလိုနီကိုတည်ထောင်လိုသည်။
အနာဂတ်၌အမှန်တကယ်အာကာသစစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အမေရိကန်သည်အာကာသကိုထိန်းချုပ်ရန်အခိုင်အမာရှိသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာကာသတပ်ဖွဲ့သည်ယူအက်စ်ယူနီဖောင်း ၀ န်ဆောင်မှုရှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သောအမေရိကန်စစ်တပ်၏အာကာသဝန်ဆောင်မှုဌာနခွဲဖြစ်လာပြီးကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်လက်ရှိလွတ်လပ်သောအာကာသစခန်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အများပိုင်သတင်း အိႏၵိယ လ ရုရှားနိုင်ငံ အာကာသ
“ မွန်းကိုလိုနီတည်ဆောက်ရန်ရုရှားနှင့်တရုတ်” သို့အကြံဥာဏ် ၂ မျိုး
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 မှာ 12: 00 ညနေ
တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်း။ ငါ့ကိုကမ္ဘာမြေဆွဲငင်အားလိုနေရာမျိုးမှာလရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသက်ရောက်နိုင်မှုအပေါ်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်လ၏မြေထုဆွဲအားစက်ကွင်းများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်နည်း။ ဒါကသေးငယ်တဲ့အစက်အပြောက်လျှင်ဒီတစ်ခါလည်းအဘယ်သူမျှမ။ ကမ္ဘာမြေသမုဒ္ဒရာဒီရေအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်အလွန်မျှတသောဆွဲငင်အားဖြစ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 မှာ 1: 36 နံနက်
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးကိုလိုနီမှာမနေချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကလည်းစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အနာဂတ်ပါပဲ။ ကြီးမြတ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု
Pandemic in Life - မျက်မှန်တပ်ဆင်သူများသည် COVID မှအမှန်တကယ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုလား။